သတ္တုကိုကြည့်ရှုနိုင်အောင်သတ္တုဖြတ်တောက်နည်း။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / သတ္တုကိုကြည့်ရှုနိုင်အောင်သတ္တုဖြတ်တောက်နည်း။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-12-15 မူလ:ဆိုက်ကို
ထုတ်ကုန်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အဆိုအရ, ciRCALARED စက်ကိုသတ္တုရိုင်းမြင်ကွင်းစက်နှင့်သစ်သားစက်ဝိုင်းမြင်ကွင်းစက်များအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ အစာကျွေးခြင်း mode အရသိရသည်ထိုအရာဒေါင်လိုက်, အလျားလိုက်နှင့်ကတ်ကြေးများသို့ခွဲခြားနိုင်သည်။ Control Mode အရ၎င်းကိုလက်စွဲ, Semi-Automatic နှင့် Full-Automatic အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ အထူးပစ္စည်းများကိုလိုအပ်သလိုထောက်ပံ့ပေးရမည်။ သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အဆင့်များစွာပါဝင်သည်။ DIY ကိရိယာများပါဝင်ဒိဗေဒworkbench kit,ဒိဗေဒပန်းပုကိရိယာများစသည်တို့ကိုစသည်တို့
အလျင်အမြန်စသည့်ကိရိယာအမျိုးမျိုး, တိပ်တိုင်းတာ, ချိန်ညှိမှုညှိနှိုင်းမှု, Chucking ပစ္စည်းသည်စစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အကာအကွယ်ပေးသောကိရိယာများတွင်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်လက်အိတ်များ, ဖုန်မှုန့်မျက်နှာဖုံးများ,
သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများသည်မြန်နှုန်းမြင့်မားသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူလည်ပတ်ရမည်။SAfety လက်အိတ်ဝတ်ဆင်ရမယ်သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုမီ စက်နှုိးs။ အလုပ်လက်အိတ်သည်မည်သည့်ဖြတ်တောက်မှုနှင့်ခြစ်ခြင်းကိုတားဆီး။ သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်အခိုင်အမာထားရမည်မှတ်စုယူပါသိုထားingဖြတ်ခံရသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများမှဝေး။ ဖုန်မျက်နှာဖုံးသည်မည်သည့်ပျံသန်းနေသောအပျက်အစီးများသို့မဟုတ်သတ္တုအပျက်အစီးများကိုပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းထဲသို့0င်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများပါဝင်သည်သတ္တုဖြတ် grinder ကိုဖြတ်,အသေးစားသတ္တုကြိတ်စက်, သတ္တု cutter ကိုကြိတ်စသည်တို့ကိုစသည်တို့
(1) ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်A၏ pplicationMetalCအီရီSawBမေှာင်ယ
သတ္တုရိုင်းရိုင်းစိုင်းထီးပွဲ၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာမြို့ပတ်ရထားကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောမြို့ပတ်ရထား Saw Blade သည်ကောင်းသောထုတ်ကုန်များကိုဖြတ်နိုင်သည်။ Circular Saw Blade ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအရရွေးချယ်ရမည်။ Diamond Saw Blade သည်သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အချင်း, အထူ, သွားများ, သွားများ, သွားပုံသဏ္ and ာန်နှင့်ပတ်0န်းကျင်၏ထောင့်များကဲ့သို့သော parameters များ, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောရွေးချယ်မှုနှင့် collocation တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုအထောက်အကူပြုသည့်မြို့ပတ်ရထားမြင်ကွင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအပြည့်အဝပြသနိုင်သည်။
အသည်းကွဲခြင်းကိုမြို့ပတ်0န်းကျင်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အခါအခွံမာသီး, သော့ခလောက်နှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဤသည်ဓါးကိုအနေအထားတွင်စောင့်ရှောက်ရန်ကူညီပေးသည်။ ထို့အပြင် Saw Blade သည်မြို့ပတ်ရထားမြင်ကွင်းနှင့်နီးသည် လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်.
Blade Adustment Slider သည်သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းကိုမြင်ကွင်း၏ဘေးထွက်တွင်တည်ရှိသည်။ slider သည်ဓါးကိုတက်။ အောက်သို့ရွေ့လျားစေသည်။ ဤဓါးအနက်သည် 1/4 လက်မ 1/4 လက်မ (0.635 စင်တီမီတာ) သည်သတ္တုထက်ပိုထူရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိပြုရမည်။ သတ္တုဓါးဆန့်ကျင်ဖြတ်သည်။
(4) clampMအပေါ် etalTအရည်အချင်းပြည့်စုံသော
ဖြတ်ခံရဖို့သတ္တုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်huဓါး၏အစွန်းမှာ ng ။ ဒါဟာအညီအမျှသတ္တုဖြတ်ဖို့ကူညီပေးသည်။Tသူဓါးသွားလိုချင်သောမြန်နှုန်းမှာသတ္တုဖြတ်ခြင်းစတင်ခဲ့သည်by ကမြို့ပတ်ရထားကိုလှည့်။
သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အဆင့်များစွာပါဝင်သည်။ မြို့ပတ်ရထားစစ်ဆင်ရေးမတော်တဆမှုများကြောင့်အော်ပရေတာ၏အတွေ့အကြုံမှာအော်ပရေတာ၏အတွေ့အကြုံမရှိခြင်း, လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှုများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကာကွယ်မှုကောင်းတစ်ခု ရဖြစ်ပြုလုပ်ne.
wenzhouMIbonder Machinery Co. , Ltd. သည်အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်သည်ဒိဗေဒeLectic Tools များအပါအဝင်pသံလမ်းrဒိုပီtool,cမနေpခေျာက်သရုပ်eကောင်းသောcအကြီးဆုံး,eလမ်းဘပီးယားminidအော်ဟစ်စသဖြင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး0န်ဆောင်မှုကောင်းသည်။ ဝမ်းသာစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းနာယကရန်.
HOT SALY Mini လျှပ်စစ်ကြိတ်သမား အိတ်ဆောင် Power Hobby Rotary Tools Kit Rotari Tool Mini Grinder Stone Grinder လျှပ်စစ် နောက်ဆုံးပေါ်လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကလောင် သတ္တု cutter ကိုကြိတ် Pen စတိုင်အလိုအလျောက်ကြိတ်စက် rotary tool ကို polishing ကြိုးမဲ့အိတ်ဆောင်ထွင်းထု carver လျှပ်စစ်အသေးစားလေ့ကျင့်ခန်း